Beauty Up Skin & Aesthetic Center | Beauty MM
Beauty Up Skin & Aesthe…
အမြင့်ဆုံးသော ကျွမ်းကျင်မှု၊ မြောက်မြားလှစွာသော အတွေ့ အကြုံခေတ်အမီဆုံးသော နည်းပညာ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်၊ ပျူဌာဖော်ရွေချိုသာသော ဝန်ဆောင်မှု၊ အချိန်ပြည့်စကားပြန်မှ လိုက်လံကူညီစောင့်ရှေက်ပေးမှုများဖြင့် သင့်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲက အလှတရားများစွာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့Beauty Up (Official agent of Kamol Cosmetic Hospital) မှအမြဲ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
11:00 AM – 8:00 PM ⚠️တနင်္လာနေ့တိုင်းဆေးခန်းပိတ်သည် ⚠️
09 44199 7898
No. 214, First Floor, Waizayanta Road,Between Pyithaya Street and Yadana Road, Near Entry to Aung Yadana Hospital, Thin Gan Gyun Township.
March လအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းအဖြစ် ၂၅၀၀၀၀ ကနေ ၁၉၀၀၀၀ အထိလျှော့ချပေးထားပါတယ် 😱
ဘယ်အချိန်ထိ မိတ်ကပ်လိမ်းတိုင်း နှာခေါင်းအတွက်သီးသန့် အချိန်ပေးနေအုန်းမှာလဲ ? 🙄
Beauty Up ကို သာလာခဲ့လိုက် .. မိနစ်လေးဆယ်လောက် အချိန်ပေးယုံနဲ့သင့်နှာခေါင်းလေးလှသွားမယ် 👃
ခွဲစိတ်ဖို့ မလို .. နာကျင်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ အလှဆုံး နှာခေါင်းလေး ကို ရပြီဆိုရင် သင်မိတ်ကပ်လိမ်းတိုင်း နှာခေါင်းကို Contouring လုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့ .. 😍
Non-Surgical Nose Thread ကုသမှုအသေးစိတ် ကို သိချင်တယ်ဆိုရင် chat box (ဒါမှမဟုတ်) 09 44199 7898 ကို အခုပဲ ဆက်မေးလို့ ရ ပါတယ်နော် ☎️
မျက်နှာ အရေးအကြောင်း ပျောက်လိုသူများ အတွက်
အထူးသင့်တော်သော Facial Treatment ဖြစ်ပါသည်။
🔸Superior Facial Treatment
ဆေးထိုးစရာမလို / မနာမကျင်ပဲ မျက်နှာ အသားအရေတင်းရင်းလိုသူများ
အသားအရေ ဖြူဖွေးဝင်းပလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်သောNeedleless Superior Facial mesotherapy treatment ဖြစ်ပါသည်။
Ultrasonic wave အသုံးပြု၍ မျက်နှာ အသားအရေကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော
Vit C ဓာတ်၊
Collagen စသော အဟာရဓာတ်များဖြည့်သွင်းပေးသော Treatment ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်နူးညံ့ ညင်သာသော electrical pulses လေးများကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပေါ်ရှိ
cell – channel လေးများကို ဖွင့်ကာ အသားဖြူဆေး၊အသားကြည်ဆေး၊အသားအရေ
တင်းရင်းစေသော ဆေးများ ထည့်သွင်းကုသပေးသော Treatment ဖြစ်ပါသည်။
နဖူး / မျက်မှောင်တွန့် အရေးအကြောင်း
ကျီးခြေထောက် / နှာခေါင်းဘေး အရေးအကြောင်း
မေးရိုးကြွက်သားသေးပြီး မျက်နှာ သွယ်သွယ်လျလျလေးနဲ့ လှချင်သူများ
ခြေသလုံး သွယ်သွယ်လေးနဲ့ လှချင်သူများအတွက်
Smile line ဖျောက်ချင်သူများ
နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးနဲ့ လှချင်သူများ
မေးစေ့ ချွန်ချွန်လေးနဲ့ v – shape ဖြစ်လိုသူများ
မျက်လုံး အောက်အရေးအကြောင်း ဖျောက်ချင်သူများ အတွက်
filler injection treatment
အသက်အရွယ်ကြောင့် လျော့ရဲလာသော မျက်နှာအသားအရေကို
ပြန်လည်ပင့်တင်ပေးပြီး ၁၀နှစ်မျှပြန်လည်နုပျိုလှပသွားစေမည့် cod thread lift
ချွေးပေါက်ကျယ်နေသူများ၊ အသားအရေ တင်းရင်းလိုသူများ၊ facial glow
ဖြစ်လိုသူများအတွက် mono thread lift
နှာတံချွန်ချွန် စင်းစင်းလေးနဲ့ လှချင်သူများ အတွက် High – Co thread lift
မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေ သူများအတွက် cog thread lift
အဆီပိုရှိသူများအတွက် အဆီဖျော် lipo thread
🔸Fat Dissolve Injection
ခန္ဓာကိုယ်၏ မလိုအပ်သော နေရာများတွင်ရှိနေသော အဆီပိုများ
ပေါင် အဆီပိုများ အတွက် အဆီဖျော် ဆေးထိုးကုသခြင်း
🔸IPL -Intense Pulsed Light
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်သော အမွှေးအမျှင်များကို ရာသက်ပန် ဖယ်ရှားလိုသူများ
မျက်နှာ အသားအရေကြည်လင်ဝင်းပ လိုသူများ
ရောင်ရမ်းနေသော ဝက်ခြံများ အတွက် အလင်းပြကုထုံး IPL
🔸PRP – သွေးရည်ကြည်ကုထုံး
မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ သွေးရည်ကြည်ကို အသုံးပြု၍
မျက်နှာပေါ်ရှိ အမာရွတ်နှင့် ချိုင့်ခွက်များကိုကုသခြင်း
အသားအရေ ညီညာ၍ ကြည်လင်ဝင်းပစေခြင်း
ဆံပင်ကျွတ် / ဆံပင်ပြန်ပေါက်ကုသခြင်း
မနာမကျင် / ဆေးထိုး / ခွဲစိတ်စရာမလိုပဲ(နာကျင်မှု အလျင်းမရှိပဲ)
လည်ပင်းအရေးအကြောင်း ပျောက်ပြီး တင်းရင်းလှပလိုသူများ
ပေါင်တံကျစ်လျစ်သွယ်လျလိုသူများ အတွက်HIFU Treatment ဖြစ်ပါသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကင်းစင်စွာဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြူစင်လှပလိုသူများ အတွက် ဆေးသွင်းကုသမှုWhitening Infusion ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။
Kamol Cosmetic Hospital မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အလှရေးရာဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ
🌸Face Surgery (မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းများ)
Ear surgery (နားအလှပြုပြင်ခြင်း)
Hair transplant ( ဆံပင်စိုက်ခြင်း)
Cheekbone surgery ( ပါးရိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်း)
Jaw surgery ( မေးရိုးခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း)
Eyes surgery/ blepharoplasty ( မျက်အိတ်အဆီထုတ်/ မျက်ဝန်းအလှပြုပြင်ခြင်း
Chin surgery ( မေးစွေခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း)
Rhinoplasty/ nose surgery (နှာတံ/ နှာခေါင်းအလှခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း)
🌸Body surgery (ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းများ)
Buttock Augmentation ( တင်သား ခွဲစိတ်ကုသခြင်း)
Breast Surgery / Augmentation ( ရင်သားခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း)
Arm/ Body/ Thighs Lift (လက်မောင်း/ ခန္ဓာကိုယ် /ပေါင် တင်းရင်းစေခြင်း)
Liposuction ( ခန္ဓာကိုယ် အဆီပိုများ စုပ်ထုတ်ခြင်း)
🌸MTF – FTM surgery (လိင်အသွင်ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းများ)
Male to Female surgery ( အမျိုးသားမှ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်/ မျက်နှာ/ လိင်အသွင်ပြောင်းခြင်း)
Female to Male surgery ( အမျိုးသမီးမှ အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်/ မျက်နှာ/ လိင်အသွင်ပြောင်းခြင်း)
Pro Skin – Face Spa & Ae…
Skin Art Aesthetic and laser Clinic…